Dr Ian ( 2015 ) - Myanmar Asian TV Channel
Dr Ian ( 2015 )
2NE1 ဆိုရင်တော့အကုန်သိကြမယ်ထင်ပါတယ် …
2NE1 ရဲ့ Sandara Park နှင့် The secret of Birth,Love Rain, Good Doctor, Pinocchio ကားတွေမှာပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Kim Young Kwang တို့က ဒီကားလေးမှာ ပါဝင်ထားကြတဲ့ Mini series လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ”Dr Ian”ဆိုတဲ့ web romance drama လေးပါ … စုစုပေါင်း ၉ပိုင်းပါရှိပါတယ် …
ချစ်​သူရဲ့ သစ္စာ​ဖောက်​မှုကို ခံစားရတဲ့ ဆိုဒန်း …….
ချစ်​သူရဲ့ ​ချောက်​တွန်းမှု​ကြောင့်​ နာမည်​ကြီး စိ်​တ်​​ရောဂါ ကုဆရာဝန်​ တာဝန်​မှ နားခံရတဲ့ ဆရာဝန်​မို or ဆရာဝန်ရမ်…….
ဆိုဒန်းရဲ့ စိတ်​​ရောဂါကို ​ဒေါက်​တာမိုမှ ကု​ပေးဖို့ ကူညီလိုက်​ရာမှ
တွေ့ကြုံရတဲ့ စစ်​မှန်​တဲ့ အချစ်​ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်​ ဖွင့်​ဆိုပုံ အ​ကြောင်းကို ရည်​ညွန်းထားတဲ့ ဇာတ်​လမ်း​လေးပါ …
Translator : Krystal
File size : around 100 MB
Episode 02 : Openload Episode 02 : olidDrive
Episode 04 : Openload Episode 054: SolidDrive
Episode 07 : Openload Episode 08 : SolidDrive
Starring: Kim Young-kwang, Sandara Park,
Kiss that Kills ( 2018 )
Original Title : Todome no Kisu အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ လက်ရှိ ဂျပန်ဇာတ်ကား ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား hot ဖြစ်လျက်ရှိတဲ့ kiss that Kills ( Todome.no.Kiss ) ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် …. သရုပ်ဆောင်အဖြစ် – ပျိုမေတွေရဲ့ အသည်းစွဲ မင်းသားကျော် တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Kento Yamazaki…
The Mist : Season 1 ( 2017 )
ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ The Mist ဆိုတဲ့ 2017 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Eng Series လေး တစ်ခုပါ … The Mist ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ 1980 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Stephen King ရဲ့ ၀တ္ထုကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … Stephen King ဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို့မေးရင်တော့ 2017…
Adolescene Medley ( 2013 )
1 hr4min min
Genre: Comedy, Friendship, School
Mother ( 2018 )
ကိုရီးယားထုံးစံ Romance ,Romantic Comedy တွေ Fantasy Melodrama တွေကနေကွဲထွက်ပြီး ရင်တမမနဲ့မျက်ရည်လည်ရွဲကြည့်ရမယ့် drama လေးပါ Main Cast အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် Lee Boyoung ဒီကားအတွက် အထူးတလည်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်သစ်လေး Heo Yool တို့နဲ့အတူ Ko Sun Hee , Lee Hye…